Kheladi - चटारो लिगको, वाचा अलपत्र
कात्तिक १२, २०७८ १९:३५
महत्वाकांक्षी चर्का नारासहित अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्व हत्याएको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल अब ६ महिना पनि बाँकी छैन । तर देशभरको फुटबललाई पुनर्संरचना गर्ने उनीहरूको वाचा भने जस्ताको तस्तै छ ।
२०७२ सालको भुँइचालोले देशकै एकमात्र दशरथ रंगशाला चिरा पारेपछि पछिल्ला केही वर्षदेखि सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगका साथै राष्ट्रिय लिग हुन सकेको थिएन । लामो समयदेखिको लिगेसी तोड्दै नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकायमा प्रवेश गर्दा कर्माछिरिङ शेर्पा नेतृत्वको टोलीले लिग सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने वाचा गरेको थियो ।
सँगै मोफसलका प्रतियोगितालाई पुनर्संरचना गर्ने नारा पनि चर्को रूपमा घन्काइएको थियो । तर, सबैभन्दा बढी महत्व पाउनुपर्ने मैदानभित्रको फुटबल अहिले सबैभन्दा बेहाल अवस्थामा छोडिएको छ । मोफसलका प्रतियोगिताहरू उस्तै भद्रगोल अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय फुटबलको मेरुदण्ड मानिने लिग त नेतृत्वका लागि झारो टार्ने कर्मकाण्डमै सीमित भएको छ ।
ठुल्ठूला नारा घन्काएर आएको नेतृत्वले लिगको मर्ममै प्रहार गर्दै बिना रेलिगेसन सुरु गरेको सहिद स्मारक लिग कार्यकाल सकिन लाग्दा प्राविधिक रूपमा पुरानो अवस्थामा आइपुगेको छ । अर्थात यसपालिबाट बल्ल शीर्ष डिभिजनको लिगमा दुई टोली रेलिगेसनमा पर्ने तथा ‘बी’ डिभिजनबाट दुई टोली बढुवा हुने व्यवस्था लागु हुँदै छ ।
तर, अघिल्ला कार्यकालमै विजेताले १ करोड रुपैयाँ पुरस्कार पाउन थालिसकेको लिगमा बल्ल यसपालि च्याम्पियन टोलीलाई ७५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने भएको छ । पुरस्कारको दृष्टिमा त अझै नेपाली लिग पश्चगमनमै छ ।
कार्यकाल सकिँदा पनि पुरानै अवस्थामा किन पुग्न सकेन लिग ? दोहोरो राउन्ड रोबिन लिगको अभ्यास भइसकेको नेपालमा भर्खर आएर एकोहोरो राउन्ड रोबिन लिग आयोजना गरेर नेतृत्वले ठूलो काम गरें भनेर डंका पिट्न मिल्छ ?
कोभिड १९ महामारीका कारण गत वर्ष हुन नसकेको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगबाट २०७६ सालमा पुछारको एक टोलीलाई मात्र रेलिगेसनमा पारिएको थियो । त्यो बेला पुछारमा सीमित सरस्वती क्लबले शीर्ष डिभिजनको हैसियत गुमाएको थियो । २०७५ सालमा शेर्पा कार्यसमितिको नेतृत्वमा पहिलो पटक लिग हुँदा रेलिगेसनको प्रावधान नै थिएन ।
लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्र भन्छन्, ‘कोभिड १९ महामारीको प्रभावले गर्दा विश्वभर नै खेलसंख्या घटाइएको छ । महामारीका कारण फुटबल सिजन नै ढिलो सुरु गर्नुप¥यो । त्यसको प्रभावस्वरुप डबल लिग गर्न सकिएन ।’
उनका अनुसार डबल लिग गर्न नसके पनि एन्फाले सिंगल लिग खेलाएपछि शीर्ष आठ टिमलाई च्याम्पियन्स लिग र पुछारका ६ टिमलाई रेलिगेसन लिग खेलाउने योजना बनाएको थियो । तर सुरुमा सहमति जनाएका क्लबहरूले पछि लामो लिग खेल्न अस्वीकार गरेका कारण सिंगल लिग गर्नुपरेको हो ।
‘क्लबहरूसँगको पहिलो बैठकमा माइन्युट नै गरिसकेका थियौं । अर्को बैठकमा क्लबहरूले लामो लिग खेल्न असमर्थता जनाउँदै अनुरोध गरेपछि सिंगल लिग गर्न लागेका हौं,’ मिश्रले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरबाहेक मैदानभित्रको फुटबल निष्क्रिय भए पनि मैदानबाहिर भने फुटबल निकै सक्रिय छ । एन्फाका शीर्ष पदाधिकारीदेखि क्लब र जिल्लासम्मका अधिकारीहरूलाई आगामी वैशाखमा हुने चुनाव रौनक लागिसकेको छ । प्रत्येक दिन फरक गुटका चुनावकेन्द्रित भेला र छलफलहरू भइरहेका छन् ।
तर मैदानभित्रको फुटबलको हकमा भने डेढ वर्षे कोभिड महामारीको बहाना गरेर चारवर्षे कार्यकाल एन्फाले खेर फालिसकेको छ ।
डेढ वर्षे कोभिडको बहाना गरेर चारवर्षे कार्यकाल खेर फाल्न पाइन्छ त ?
मिश्र तर्क गर्छन्, ‘स्थापित भएको ठाउँमा डेढ वर्षले केही असर गर्दैन । तर नेपालमा संस्था स्थापित थिएन । भुँइचालोले पूर्वाधार भत्किएका थिए । महत्वाकांक्षी नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने आधार थिएन । सबथोक व्यवस्थित गर्ने क्रममा नेपालजस्तो देशमा त्यो डेढ वर्षले पनि चार/पाँच वर्ष बिथोल्छ ।’
लिग यसै महिनाबाट
१४ टिमको सहभागिता रहने शीर्ष डिभिजनको लिग यो वर्ष कात्तिक २९ गते सुरु गर्ने एन्फाले घोषणा गरेको छ । राउन्ड रोबिन पद्दतिमा हुने लिगमा सबै टोलीले एक-अर्कासँग एक पटक प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
विजेताले ७५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ भने उपविजेताले ५० लाख तथा तेस्रो हुने टोलीले २५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । तर, त्यसपछिका टोलीले भने नगद पुरस्कार पाउने छैनन् । विगतमा शीर्ष ६ टोलीले नगद पुरस्कार पाउने गरेका थिए ।
विदेशी खेलाडीको हकमा भने एक पटकमा दक्षिण एसियाका एकसहित चारसम्म खेलाडीलाई मैदान उतार्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतको तुलनामा यसपालि व्यक्तिगत पुरस्कारमा परिवर्तन गरिएको छ । विगतमा उत्कृष्ट स्ट्राइकर, मिडफिल्डर, रक्षक, गोलकिपर, प्रशिक्षक र सर्वोकृष्ट खेलाडी गरी ६ जना व्यक्तिगत पुरस्कारको हकदार बन्ने गरेकामा यसपालि भने तीन खेलाडीमात्र पुरस्कृत हुनेछन् । प्रशिक्षकको विधा हटाइएको छ ।
लिग निर्देशक मिश्रका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी गोल्डेन बल, उत्कृष्ट गोलकिपर गोल्डेन ग्लोभ्स, उत्कृष्ट युवा खेलाडी राइजिङ प्लेयरको उपाधिबाट विभूषित हुनेछन् । उनीहरूले पाउने पुरस्कारबारे भने निर्णय भइसकेको छैन ।
फागुन १४ सम्म चल्ने लिगका लागि यसपालि तयारी खर्चस्वरुप सबै सहभागी टोलीले २० लाख रुपैयाँका दरले पाउनेछन् । प्रत्येक खेलको म्यान अफ दी म्याचले १० हजार पाउनेछन् । पुरस्कारमा कटौती गरे पनि सहभागी सबै टिमलाई म्याच फी दिइने मिश्रले बताए । उनका अनुसार वागमती प्रदेश सरकारको प्रायोजनमा प्रत्येक खेलमा जित्ने टिमले ५० हजार रुपैयाँ थप पाउनेछ भने बराबरी भए दुवै टिमले २५-२५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
राष्ट्रिय लिग नहुने
वर्तमान नेतृत्वले चुनावअघि उठाएको अर्को चर्को नारा राष्ट्रिय लिगको थियो । तर कार्यन्वयनमा उदासीनताका कारण राष्ट्रिय लिगको नारा झनै अलपत्र परेको छ । यही कार्यकालमा राष्ट्रिय लिग सुरु हुने सम्भावनासमेत टरेको छ ।
एन्फाले गएको भदौ ३० देखि राष्ट्रिय लिग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर कोभिडको बहानामा अझैसम्म त्यो सुरु हुन सकेको छैन । भदौमा सुरु नभएको राष्ट्रिय लिगको नयाँ मिति पनि तोकिएको छैन ।
‘एन्फाकै कार्यक्रमअनुसार फागुन मध्यसम्म सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग हुनेछ । त्यसपछि वैशाखमा त एन्फाको चुनाव गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय लिग कहिले गर्ने ?’ एन्फाका एक वरिष्ठ पदाधिकारीले भने, ‘अब यो कार्यकालमा राष्ट्रिय लिग सम्भव छैन ।’
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगका शीर्ष ६ टोलीसँग मोफसलका चार टिम मिसाएर होम एन्ड अवे पद्दतिमा प्रतिस्पर्धा गराउने अवधारणा थियो राष्ट्रिय लिग । त्यसैका लागि एन्फाले प्रदेशका टिम छान्न एन्फा प्रेसिडेन्ट्स कप आयोजना गरेको थियो ।
सात प्रदेशका च्याम्पियन क्लबहरूबीच गराइएको प्रेसिडेन्ट्स कपबाट गण्डकीको त्रिवेणी युथ क्लब, प्रदेश २ को मनकामना युथ क्लब, लुम्बिनी प्रदेशको धम्बोजी स्पोर्टस क्लब र सुदूरपश्चिमको स्टार सिटी क्लब राष्ट्रिय लिगलाई छानिएका थिए ।
प्राविधिक रूपमा अब राष्ट्रिय लिग सम्भव छैन । सहिद स्मारक लिग सुरु भइसक्यो । अब फागुनपछि वैशाखअघि राष्ट्रिय लिग गर्ने हो भने पनि त्यतिबेलासम्म सहिद स्मारक लिगको शीर्ष ६ मा नयाँ टिम आइसक्छन् ।
‘तर एन्फा केन्द्रको अकर्मण्यताका कारण जिल्ला, प्रदेश र प्रेसिडेन्ट्स कप हुँदै छानिएका चार टोलीले राष्ट्रिय लिगको गन्तव्य पाउने सम्भावना रहेन,’ एन्फाका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार प्राविधिक रूपमा अब राष्ट्रिय लिग सम्भव छैन । सहिद स्मारक लिग सुरु भइसक्यो । अब फागुनपछि वैशाखअघि राष्ट्रिय लिग गर्ने हो भने पनि त्यतिबेलासम्म सहिद स्मारक लिगको शीर्ष ६ मा नयाँ टिम आइसक्छन् ।
‘जसले गर्दा कसलाई राष्ट्रिय लिगमा सहभागी गराउने भन्ने विवाद हुन्छ । त्यसैले यो वर्षलाई राष्ट्रिय लिग सम्भव छैन,’ उनले भने ।
कानुनी उपचार खोज्ने क्लबको तयारी
राष्ट्रिय लिगको मिति घोषणा नहुँदा यसका लागि छनोट भएका टिमहरू अन्योलमा रहेको प्रेसिडेन्ट्स कप च्याम्पियन स्टार सिटी क्लबका अध्यक्ष कुमार शाहीले बताए ।
एन्फाका पदाधिकारीहरूले अझै पनि फागुनमा राष्ट्रिय लिग गर्ने मौखिक आश्वासन दिए पनि औपचारिक घोषणा नगर्दा तयारीका लागि आफूहरूलाई अप्ठेरो परेको उनको भनाइ थियो ।
‘राष्ट्रिय लिगको विषयमा हामी अझैसम्म अन्योलमा छौं । एन्फाको आन्तरिक किचलोमा हामी साँढेको जुधाइ बाच्छोको मिचाइ भएजस्तो लाग्छ,’ शाहीले भने, ‘एन्फाले राष्ट्रिय लिगको मिति घोषणा गरे तयारी गर्न हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो । प्रायोजक खोज्ने, विदेशी खेलाडी खोज्ने, स्थानीयको प्रशिक्षण सुरु गर्नेलगायतका काम ढुक्कसँग गर्न पाइन्थ्यो । तर, एन्फाले घोषणा नगर्दा एकदमै अन्योल भएको छ ।’
२०७६ सालमा जिल्ला लिग खेलेका टोलीहरूले प्रदेश लिग खेलिसकेपछि कोभिड महामारीका कारण एक वर्ष आरामपछि गत चैतमा मात्र प्रेसिडेन्ट्स कप खेल्न पाएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय लिगका लागि अर्को एक वर्ष कुर्नुपर्दा आर्थिक रूपमा ठूलो मार परेको शाही गुनासो गर्छन् ।
‘राष्ट्रिय लिगलाई भनेर स्थानीय खेलाडी अनुबन्ध गरेर राखेका छौं । जिल्लाका क्लबहरूलाई पदाधिकारीले घरखेत बेचेर चलाउनुपर्छ । एउटा प्रतियोगिता खेल्नका लागि दुई वर्षदेखि प्रक्रियामै समय बिताइरहेका छौं । ठूलो लगानी भइसकेको छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय लिग नै हुने कि नहुने भन्ने अझैसम्म टुंगो नहुनु दुर्भाग्यजनक हो । राष्ट्रिय लिग भएन भने कानुनी बाटो पनि खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । एन्फाले कि राष्ट्रिय लिग गराउनुपर्छ नत्र सबै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । राष्ट्रिय लिग नगर्ने हो भने जिल्ला, प्रदेश लिग र प्रेसिडेन्ट्स कप गरेको नौटंकीजस्तो भएन र ?’
मोफसलका क्लबले राष्ट्रिय लिग र ‘ए’ डिभिजन लिग सँगै गर्दा सबै खेलाडीको रोजाइमा ‘ए’ डिभिजन लिग पर्ने भएकाले दुई ठूला लिग नजुधाउन अनुरोध गरेका थिए ।
एन्फाले राष्ट्रिय लिग आयोजनाका लागि भन्दै जिल्लाबाट छानिएका चार क्लबका प्रतिनिधिलाई काठमाडौं बोलाएर एउटा बैठक पनि गरेको थियो । एन्फाले ‘ए’ डिभिजन र राष्ट्रिय लिग सँगै गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई मोफसलका चारै क्लबले एकै स्वरमा अस्वीकार गरेका थिए ।
‘खेलाडीले लामो समयको मान्यता भएका सहिद स्मारक लिगका क्लब रोज्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले हामीलाई पनि कि लामो समयको मान्यता दिनुस्, नत्र लिग नजुधाउनुस् हामीले भन्यौं । उहाँहरूले हुन्छ, समय मिलाएर गर्ने भन्नुभयो । तर अहिलेसम्म मिति तोक्नुभएको छैन,’ शाहीले खेलाडीसँग भने ।
राजुकाजी, ‘फुटबलका महात्मा’
बंगलादेशमाथि वेस्ट इन्डिजको रोमाञ्चक जित